घृणाको हार – प्रेमको जीत- विविधा - कान्तिपुर समाचार
घृणाको हार – प्रेमको जीत
सन्दर्भ : ९/११
भाद्र २५, २०७५ दिवाकर बागचन्द
काठमाडौँ — छिया छिया भएको मनले घाऊ कोट्याउँछ । घाऊ कोट्याउँदा पीडा झन असह्य हुन्छ। यसको अनुभूती चोट पाएकाहरुलाई हुन्छ। ति आत्माहरुलाई थाहा हुन्छ, जस्ले अनहाकमा ज्यान गुमाए । हजारौ सपनाहरुलाई अधुरै छोडेर, संसारबाट बिदा लिन वाध्य भए ।
११ सेप्टेम्बर सन् २००१ मंगलबारका दिन एउटा भयानक दृष्य टीभी स्क्रिनमा देखा पर्‍यो, जस्ले एक पलका लागि पृथ्वीको धड्कन रोकी दियो । मानौ बन, जङ्गल, नदी नाला, सम्पूर्ण प्राणी, मानब जातिलाई सोधी रहेका थिए, हे मनुस्य तिमीले यो के गर्यौ ? मानब जाति आफुलाई प्रश्न गर्न वाध्य भयो । के मानब यति क्रुर हुन सक्छ ? यति निर्दयी हुन सक्छ? बिडम्बना १७ वर्षदेखि मानबता आजसम्म यही प्रश्न गरी रहेछ ।
यही दिन अमेरिकाको म्यानह्याटनस्थित टुइन् टावरमा दुई प्लेन ठोकेर आतंककारीहरुले २९९६ मानबको ज्यान लिए, ६६०० लाई घाइते बनाए । ९/११ को आक्रमणमा ज्यान गुमाएका र घाइतेहरु ११० तल्लामाथि त्यस दिन, टुइन् टावरमा स्वतन्त्र रुपमा काम गर्दै जीवनका सपनाहरु बुनिरहेका थिए । तर एक “घृणाको ब्यापारी" सौदागरले दुई मिनेटमा ति सपनाहरुलाई धुलोमा मिलाई दियो । त्यो दिन मानबीय सम्बेदना र सद्भावको अबसान भयो । ति आतंककारीको बारेमा चर्चा गर्नु , तीनलाई मानब भनेर स्वीकार गर्नु हो , जुन म गर्न चाहन्न । एउटा मानबले यस्तो दानबीय कार्य गर्नै सक्दैन ।
उसो त संसारले प्रथम र दोस्रो विश्व युद्धको त्रासदी नदेखेको होइन । त्यसको परिणाम नभोगेको होइन । ति युद्धका बिबिध कारण थिए । नश्लबाद, अधिनायकबाद, एकाधिकारबाद, बिस्तारबाद र व्यक्तिगत महत्वकांक्षा केही प्रमुख हुन् । यि दुबै युद्धहरुमा, युद्धरत पक्ष स्पस्ट थिए । यसमा केही हदसम्म भए पनि सर्बसाधारणलाई ज्यान जोगाउने उपायहरु प्राप्त थिए । तर ९/ ११ घृणाको निष्कपट “मेनिफेस्टेशन “ प्रकटिकरण थियो । कसले किन र केका लागि निर्दोषहरुको ज्यान लियो, उत्तर खोज्न मनोबैज्ञानिक चिरफार गर्नुपर्ने हुन्छ । टुइन टावरमाथिको यो हमला शितयुद्ध भन्दा घातक साबित हुन पुग्यो । यस्ले बिश्वलाई यसरी बिभाजित गर्‍यो कि, मानबले, मानबलाई गर्नुपर्ने, न्युनतम् विश्वास र सद्भभाव पनि लुप्त हुन पुग्यो । केही अतिबादीहरुको हर्कतले, कुनै एक धर्म बिशेष र त्यसका अनुयायीहरुलाई मानबता बिरोधीका रुपमा चित्रित गरिन थालियो । यतिसम्म कि त्यो समुदायका मानबताबादी परोपकारीहरु पनि आफ्नो पहिचान लुकाउन वाध्य भएका थुप्रै दृस्टान्त अमेरिकामा सुन्न र देख्न पाईन्छ।
सम्पूर्ण समुदायको दानवीकरण गरियो । ९/११ सबैका लागि डर अर्थात “खौफको” प्रतिक भएको छ । ९/११ का सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक प्रभाव त पर्यो नै, थुप्रै देशले आतंकवाद नियन्त्रणको लागि कठोर कानुन निर्माण गरे । बेलायत, क्यानडा र अमेरिकाले पनि कडा कानून ल्याए । होमल्यान्ड सिक्युरिटी एक्ट र यूएस्ए पेट्रिओट एक्टले फेडेरल सरकारलाई बढी अधिकार दियो । देशको सुरक्षाका लागि कानुन बनाउनुलाई सकारात्मक नै मान्नु पर्छ। तर संसार साघुरियो, सोच साँघुरियो मन सानो भयो, समाज अब खुला रहेन । राजनीति रिवर्स गेअरमा जान थाल्यो । राजनीति अकल्पनीय पथतर्फ अग्रसर हुन थाल्यो । एकल भाषा, एकल धर्मको समिश्रणबाट बनेको एउटा कुरुप राष्ट्रबादले स‌क्रमित हुन पुग्यो । नतिजा विश्व भर राजनीतिले अधिनायकबादी, स्वेछाचारी नेता एक पछि अर्को गरि पैदा गर्दैछ । लोकतन्त्र भोटिङ मशिनमा मात्र सिमित हुन थालेको छ ।
के ९/११ मा ज्यान गुमाएका र घाइतेले यस्तो विश्वको कल्पना गरेका थिए? आजको दिन पीडालाई कोट्याउने भन्दा अधुरै रहेका ति हजारौ सपना साकार पार्ने अठोटको दिन हो । अमेरिकाका फाउन्डिङ् फादर्सहरुले “विश्वको महानतम् देश” भन्ने गरेको देश अमेरिकाले, फाउन्डिङ् फादर्सहरुको त्यो बिरासतलाई अगाडि बढाउन प्रेमलाई अमेरिकी शासन बिधिको मन्त्र बनाउनु जरुरी देखिन्छ । अमेरिकाले टुइन टावर रहेकै स्थानमा अर्को टावर निर्माण गरेर त्यस् को नाम “वन वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर” “ फ्रिडम टावर” राखेर सकारात्मक सन्देश दिइसकेको छ ।
साँचो भन्ने हो भने आजको दिन याद गर्न लायक दिन नै होइन । पीडालाई प्रेममा रुपान्तरित गर्ने दिन हो । केही समय पहिले अमेरिकी गायक, स्टिवी वन्डरले गायक अरेथा फ्र्यान्क्लिनलाई श्रद्धान्जली दिदै भनेका थिए, हो, हामी सबै चीजहरूको बारेमा गलत कुरा गर्न सक्छौ, र त्यस्ता कुरा धेरै छन् । तर केवल उद्धार गर्न सक्ने, एक मात्र कुरा प्रेम हो । केवल हाम्रो राष्ट्रमा मात्र होइन, संसारभरि, फेरि हामीले प्रेमलाई महान बनाउन आवश्यक छ।
कुनै पनि देश आँफैमा महान हुँदैन, महान बिचार र महान कामले महान बन्छ देश । आज मानब जातिले स्टिवी वन्डरका महान उद्गारलाई मनन् गर्नुपर्ने देखिन्छ । सम्पूर्ण विश्वले अमेरिकी गायक, स्टिवी वन्डरको स्वरमा स्वर मिलाएर भनौ “लेट्स मेक लव ग्रेट अगेन” । आउनुहोस्, प्रेमलाई फेरी महान बनाउँ ।
प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ २१:१०
त्यसैले बाजपेयी "अटल" भए
भाद्र ६, २०७५ दिवाकर बागचन्द
काठमाडौँ — अटल बिहारी बाजपेयीलाई श्रदान्जली दिन पुगेका सामाजिक न्याय अभियन्ता स्वामी अग्निवेश तथाकथित भारतीय जनता पार्टीका कार्यकर्ताद्वारा कुट्पिट गरिएपछि आफु हिन्दू हुनुमा मलाई लघुताभास हुनथाल्यो ।
८० वर्षीय क्रान्तिकारी स्वामीमाथि भएको आक्रमणले अटलजीको निधनबाट रसाएका मेरा आँखाबाट आशु बर्सिन समय लागेन । अनेक कमजोरीका बाबजुद एउटा लोक्तान्त्रिक धर्मको रुपमा रहेको हिन्दू धर्ममाथि सोही धर्मका स्वघोषित ठेकेदारहरुद्वारा गरिएको "बसु दैव कुटुम्ब कम" को सिद्धान्त र सामजिक न्याय माथिको घिन लाग्दो आक्रमण थियो त्यो । यो दृश्यले कथित धर्मका रक्षकहरुको बौधिक "दिवालीयापन" अर्थात "इन्टेलेक्चुयल ब्यान्क्रप्सी" उजागर गर्थ्यो । यस्ले अटल बिहारी गलत पार्टीका सही नेता भन्ने ९० को दशकको भनाइलाई पुष्टी गरे झैं लाग्यो।
अहिले पुरा भारत शोकाकुल छ । अटल सबैका प्रिय थिए । यस दुखको घडीमा राजनीति र ईतिहासको निर्मम चिरफार गर्नु न्याय संगत हुँदैन । राजनीतिको सरलिकरण सजिलो पनि हुँदैन र अहिले बिबेकपूर्ण पनि ठहरिन्न । अटल मलाई मन पर्ने राजनेता थिए । म राजनेता भनिरहेछु यस्को कारण छ । जो आँफै स्पष्ट हुनेछ । अटल घुँडाको समस्याले गर्दा बिस्तारै हिड्थे । भाषण गर्दा शब्दमा जोड दिएर बोल्थे । बोल्दा बोल्दै कल्पनामा हराउन्थे । त्यो केही पलको शुन्यतामा जनता धैर्यतापूर्वक ध्यान मग्न हुन्थे, मानौ अटलको मुखारबृन्दबाट मोती टप्कदै छ ।
नेताको भाषण सुनाउन गाडी भरेर लग्नु पर्ने अवस्थामा अटलको भाषण सुन्न जनता प्रतिक्षारत रहनु आँफैमा अद्भुभुत थियो । उनको भाषणले यति महत्व किन राख्थ्यो त? भाषण शब्द मात्र होइन । त्यसमा जवाफदेहिता हुनुपर्छ भन्ने अटलले बुझेका थिए । उनको बोलीको नैतिक धरातल हुन्थ्यो । नकरात्मकता उनको परिचय थिएन । अरुलाई पछार्नु, निच देखाउने दाउपेचमा उनी सामेल भएनन् । अरुझै उनी पनि "पोलिटिसियन" त थिए । त्यो हुनै पर्छ । सत्ताको त्रासदी पनि यही हो । चाहेर नचाहेर "पोलिटीसियन" बन्नु पर्ने हुन्छ । पोलिटिसियनले जोड घटाउ गर्छ । अटल भने अलि भिन्न प्रकारका थिए । गुजरात दङ्गामा मौन रहेको आरोप खेपे । तर, बर्तमान प्रधानमन्त्री गुजरातका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई कडा शब्दमा "राज धर्म" निभाउन आदेश पनि दिए । कार्गिल युद्ध पश्चात कट्टर भारत बिरोधी पर्बेज मुसरफलाई भारत निम्ताए ।
कम्युनिस्ट भएर बिद्यार्थी छँदा, राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका बाजपेयी भारत छोडो आन्दोलनमा होमिए । जनसंघका अध्यक्ष पण्डित दिन दयाल उपाध्यायको रहस्यमय हत्यापछि जनसंघका अध्यक्ष बने । अटल बिहारी बाजपेयी हिन्दूवादको वकालत गर्ने पार्टीको मुखिया बन्नु अनौठो थियो । साम्यबादी बिगत भएका अटलको हिन्दूवादी "अवतार" आँफैमा एउटा बिरोधाभास थियो ।
उनको यो बिरोधाभासले मलाई आकर्षित गर्‍यो । आजीवन अबिबाहित अटल फिल्मका शौकिन थिए । जवानीका दिनहरुमा आफ्ना परम मित्र लालकृष्ण अड्वानीको स्कुटरमा बसेर पहिलो दिन, पहिलो शो, फिल्म हेर्न जाने यि दुईको मित्रताको किस्साले उनी मेरा लागि झन तिलस्मी ब्यक्तित्व बन्न पुगे ।
उनको जीवनको बहुआयामिक पाटो छ । उनको आम जीवनशैलीले मलाई झन उनीप्रति खिच्यो । जीवनका साधारण रस र स्वाद, अद्वैत वाकपटुता, विश्वज्ञान र बुद्धिमता, कुट्नीतिक कला र दुरदृस्टीले उनलाई बिराट छबी प्रदान गर्‍यो । उनको जीबनका अनेक रङ थिए । एक साधारण मान्छेका गुण र दोष अनि असाधारण मान्छेमा हुनुपर्ने बिशेषता दुबै उनमा मौजुद थिए ।
उनी कसरी राज नेता भए त? यसको एउटा प्रमुख कारक थियो, उनको ओजस्वी भाषण । उनी भित्र एउटा कवि थियो, जसले उनलाई कल्पनाको उचाई दियो । उनको मानवीयता र बिद्वताले उनको कल्पनाशिलतालाई यथार्थमा उतार्ने सामर्थ्य दियो । फलस्वरुप उनी बिश्वको सबभन्दा ठुलो लोकतन्त्रको सफलतम् प्रधानमन्त्रीमा गनिन्छन् । पण्डित नेहरुलाई यसको पुर्वानुमान थियो किनकी उनी पनि आँफै एउटा बिलकक्षण विद्वान राजनेता थिए । पण्डित नेहरु आफ्ना सांसदलाई अटलका कुरा गम्भिरतापूर्वक सुन्न आग्रह गर्थे ।
कुरो फेरी भाषणकै, भाषण त मोदी पनि गर्छन् । उनले भाषण कै कारण चुनाव जिते । शायद फेरी जित्ने छन् । तर, उनको भाषणमा कल्पनाशिलता छैन । एउटै रटान लाउदा लाउदै उनको भाषणको "डिप्रिसियसन" हुँदैछ। जुन मोदीकै ब्यापारिक शैलीमा भन्ने हो भने कुनै आर्थिक वर्षको अन्तमा “राइट अफ" गरिने छ ।
अटल हिन्दूवादी थिए । तर, जातीवादलाई कलंक मान्थे । उनले एक भाषणमा भनेका थिए, “मन्दिर तो प्रेरणाका केन्द्र है, कैसा मन्दिर जिस्केद्वार सबके लिए खुले नहो ? उनले भाबुक हुँदै भनेका थिए, “ हम ने अपने भाई बहेनको वेद पढ्नेसे रोका । मेरा हिन्दूत्व सिमित नही है, अन्तर जातीय विवाहको बढावा देता है, सम्मान करता हैु ।"
अटल महिलामाथि हुने बिभेद अन्त गर्न चाहन्थे । हिन्दूत्वलाई उचाइ दिन चाह्न्थे । तेसैले उनी हिन्दू धर्मलाई, धर्म होइन जीवनशैली हो भन्ने गर्थे । “पराइलाई पनि अंकमाल गर्ने शक्ति देउ प्रभु" भन्ने उनको हिन्दूत्वको परिभाषा थियो । जुन परिभाषाभित्र उनले ९३ वर्ष बिताए । सायद त्यसैले बाजपेयी "अटल" भए।
प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १६:२३